Egwuregwu bọọlụ 10 kachasị mma na enweghị njikọ Internetntanetị - Akụrụngwa News | Akụkọ akụrụngwa
Egwuregwu bọọlụ 10 kachasị mma na-enweghị Ntanetị, maka iOS na gam akporo
Laliga Santander na-aga ịmalite ọzọ na bọọlụ bọọlụ ebidola igosi, anyị nwere ike iji ya kpoo igwe anyị ọkụ nke ọma. N'etiti 2020, igwu egwuregwu vidio naanị obere oge, mana anyị anaghị achọ ịsọ mpi megide ndị egwuregwu ndị ọzọ ma ọ bụ na anyị nwere ike ịnweta njikọ intaneti dị mma ịme ya. Ihe dị ka igwu egwuregwu bọọlụ na-enweghị intaneti ka ga-ekwe omume.
Na Google Play ma ọ bụ AppStore enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke egwuregwu bọọlụ, ọtụtụ n'ime ha bụ n'efu mana ha chọrọ njikọ na-adịgide adịgide na ịntanetị, si otú a na-egbochi gị ịbanye ha mgbe ịnweghị data ma ọ bụ WiFi, naanị ihe ga-enyere gị aka bụ inwe egwuregwu dị iche iche i nwere ike igwu na-ejikọghị njikọ ahụ. N'isiokwu a anyị ga-eme mkpokọta nke kachasị mma maka ama ma ọ bụ mbadamba.
1 Ndepụta egwuregwu egwuregwu bọọlụ kachasị mma 10 na-enweghị ịntanetị maka iOS na gam akporo
1.1 FiFA bọọlụ
1.3 Ngwakọta Njikọ Nrọ
1.5 Soccer Star 2020 Top Njikọ
1.6 Onye njikwa bọọlụ 2020 Mobile
1.7 Oge Ikpeazụ 2019
1.8 N'ihe iri na otu 2020
1.9 Iko Mbaụzọ 2020
1.10 Ochie bọọlụ
Ndepụta egwuregwu egwuregwu bọọlụ kachasị mma 10 na-enweghị ịntanetị maka iOS na gam akporo
Anyị nwere ọtụtụ aha na-eme ihe a chọrọ, ha niile na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu ọ bụla, ebe ọ bụ na arụnyere na ebe nchekwa nke ama anyị. Ekwesiri ighota na ihe kariri ha nile di maka iOS na gam akporo. Anyị na-eji ohere a echetara gị na anyị bipụtara nkuzi maka nso nso a melite arụmọrụ nke egwuregwu na gam akporo.
Eze ndị eze doro anya "FIFA", egwuregwu nke nwetara ocheeze ya na egwuregwu mara mma. Egwuregwu EA kere ma kee ya, nke a maara maka àgwà a na-apụghị ịgbagha agbagha na consoles ma ọ bụ dakọtara, ọ bụkwa otu n'ime egwuregwu egwuregwu bọl kachasị mma maka ngwaọrụ mkpanaka. O nwere ikikere niile enyere na nke inwe ụwa a, otu egwuregwu ma ọ bụ ndị egwuregwu.
Ọ nwere a kpam kpam dị iche iche gameplay karịa ihe anyị na-ahụ na ya console version, a gameplay na akwusila ọzọ na Arcade n'akụkụ karia site na nhicha di ocha. Ihe kachasị mma na ụdị a bụ na o nwere «Ultimate Team» mode nke na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ọganiihu nke ndị otu anyị, na-edebanye aha ndị egwuregwu. Ọ bụ Egwu-egwu-egwu, yabụ nbudata ya ga-abụ n'efu yana ohere ịzụrụ na ngwa.
Ugbu a, anyị na-aga na aha na-anọchi ocheeze na FIFA, ọ bụ onye ọzọ karịa akụkọ ifo PES, aha nke na-anwa ịdebe kwa afọ na mmelite egwuregwu, mana ọ na-efunahụ uzu mgbe a bịara na ikikere. Ọ bụ eziokwu na ụdị a maka ekwentị mkpanaaka nwere ngalaba ọrụ dị egwu, nke na-atọ onye ọ bụla na-egwu egwu ụtọ.
Anyị nwere egwuregwu egwuregwu dịka FIFA, na-adọta akụkụ Arcade mara mma. Agbanyeghị na ebumnuche anyị bụ ka anyị kpọọ naanị anyị, anyị ga-enwe ụdị egwuregwu na-enyeju anya nke ọma maka asọmpi, gụnyere ọgbakọ mpaghara yana ndị enyi ejikọrọ na njikọ Bluetooth.
Egwuregwu PES 2021
Ngwakọta Njikọ Nrọ
Tita abụọ a enweghị ike inwe mgbagwoju anya, n'ihi na enwere ndụ karịa ha, ọ bụ otu n'ime egwuregwu kachasị mma na iOS na gam akporo. Ọ na-agwakọta egwuregwu dị mma, eserese mara mma na ikikere. Nke a pụta na a ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke egwuregwu, ìgwè na ndị egwuregwu.
Egwuregwu egwuregwu dịgasị iche iche, n'etiti nke bụ nke na-enye egwuregwu ahụ ihe ọ pụtara, ebe anyị nwere nnwere onwe iji mepụta onwe anyị "Nrọ Otu". Na mgbakwunye, anyị ga-enwekwa ohere ị ga-esi nweta ọnọdụ ọtụtụ egwuregwu ma ọ bụrụ na-ịchọrọ. IOSdị iOS gị na-amanye anyị ijikọ, ọbụlagodi na m hapụrụ njikọ ahụ.
Developer: Egwuregwu mbu metụrụ aka Ltd.
Nrọ Soccer 2021
Aha a nke Gameloft mepụtara ma bipụtara enweghị ike ịbụ efu. Ọ bụ kpam kpam free simulator, na nke Anyị nwere ike ịmepụta otu nke anyị, ịbịnye ndị egwuregwu ma ọ bụ ndị otu ndị nkuzi.
Anyị ga-enwe ohere ị wulite obodo egwuregwu anyị ma jiri nke nta nke nta na-emezi ya, na nke a anyị anaghị enwe ọfụma usoro eji egwu egwu, ọ bụ ezie na anyị nwere ọdịnaya na-anọghị n'ịntanetị zuru oke ka anyị ghara ịhapụ ya.
Ezi bọọlụ Amerịka
Soccer Star 2020 Top Njikọ
N'ebe a, anyị na-ahụ aha nke na-elekwasị anya naanị na egwuregwu nke mba dị iche iche, na-enye anyị ohere isonye na ha niile. Anyị nwere ike ịmalite ọrụ anyị dị ka ihe egwuregwu nkịtị ka anyị wee bụrụ nnukwu kpakpando, na-asọ mpi n'egwuregwu kacha mma n'ụwa.
Na mgbakwunye na egwuregwu, anyị ga-aga nke ndị nkịtị, ebe anyị nwere ike ịzụta ụlọ ma ọ bụ ụgbọ ala. Yana iku ndị nkuzi ọ bụla iji nyere anyị aka n’ọganihu anyị.
Soccer Star 2021 Egwuregwu Egwuregwu: Egwuregwu bọọlụ kacha mma
Developer: Egwuregwu Viva Egwuregwu
Soccer Star 2021 Top Njikọ
Developer: Egwuregwu Redvel
Onye njikwa bọọlụ 2020 Mobile
Omuma n'etiti ndi ochie. Ọ bụghị egwuregwu bọọlụ oge niile dịka FIFA ma ọ bụ PES, na nke a ọ bụ egwuregwu njikwa akụ, ma akụ na ụba na egwuregwu. Anyị na-ewereghachi otu ìgwè dị ka onye nnọchi anya kachasị na ọrụ anyị ga-abụ iburu ya n'elu.
Sdị SEGA a bụ dị maka ma gam akporo na iOS na ọnụahịa nke .9,99 XNUMXNa mbụ, ọ nwere ike iyi ihe dị oke ọnụ, mana oge ole anyị nwere ike itinye ego gosipụtara ya. Ekwadoro m nyocha tupu ị na-elele GamePlay iji nweta echiche nke ihe ọ na-enye.
Onye na-elekọta Football 2020 Mobile
Oge Ikpeazụ 2019
Aha ọzọ nke anyị na-agaghị eji egwu egwu n'ụdị ọdịnala, ebee ihe mgbaru ọsọ anyị bụ igwu egwu ma merie ntaramahụhụ dị iche iche, ya na ndi kachasi nma n'uwa. Ọ nwere ma offline na online mode, ekwe ka ị na na ndị enyi.
O doro anya na ọ bụ egwuregwu kachasị mfe na ndepụta ahụ dum, ebe ọkpụkpọ ọ bụla nwere ike ịmepụta ngwa ngwa n'agbanyeghị afọ ma ọ bụ ikike.
Egwuregwu ikpeazụ: bọọlụ ntaramahụhụ kacha mma n'ịntanetị
Developer: Egwuregwu Ivanovich
Egwuregwu Ikpeazụ: Egwuregwu n'ịntanetị
N'ihe iri na otu 2020
Na egwuregwu a ebe protagonist abụghị ụmụ amaala, ma nchịkwa. Dị ka Football Manager, anyị na-ahụ a njikwa vidiyo egwuregwu, ebe anyi nwere ike igbochi oru ngo nke obere klọb iji mee ka o buru ibu. Nke na-emesi anyị obi ike ọtụtụ oge nke ntụrụndụ.
Ọ bụ egwuregwu nke rụzuru nnukwu ọrụ maka ekele maka arụmọrụ ya. Anyị nwere ike ijikwa ihe niile na - eme, ma egwuregwu ma akụnụba.. Ekike uwe, egwuregwu, usoro, ego ma ọ bụ ama egwuregwu n'onwe ya.
Top iri na otu: Soccer Manager
Iko Mbaụzọ 2020
Soccer Cup bụ egwuregwu egwuregwu bọọlụ na-atọ ụtọ, ebe anyị ga-emeri ụdị nsogbu niile anyị ga-emeghe ka anyị na-egwu egwu. Egwuregwu ahụ bụ otu n'ime ihe kachasị dị ntakịrị maka usoro nchekwa na teknụzụ chọrọ. Nke a pụtara na ọ ga-arụ ọrụ nke ukwuu mmiri mmiri ọbụna na ntinye ntinye.
Anyị ga-enwe ọnọdụ ọrụ iji nwee ọganiihu ma melite otu anyị. Egwuregwu ahụ bụ otu n'ime ihe kachasị ezi uche na usoro ịme anwansị.
Egwuregwu bọọlụ 2021 - Egwuregwu bọọlụ
Developer: INLOGIC SPORTS - bọọlụ bọọlụ tennis bọọlụ bọọlụ
Egwuregwu bọọlụ 2021 - bọọlụ
Developer: Inlogic sọftụwia sro
Iji mechie mkpokọta a, anyị ga-eji egwuregwu na-atọ ụtọ yana egwuregwu nkịtị. Retro Soccer bụ egwuregwu nke football nwere ọdịdị dịkarịsịrị ala mana ọ dị oke mma. Ọ nwere egwuregwu dị egwu na egwuregwu dị mfe maka ndị niile na-ege ntị.
Nwere ụdị egwuregwu dịgasị iche iche, gụnyere usoro egwuregwu ma ọ bụ nsogbu onwe onye.
Ochie Retro - Egwuregwu Egwuregwu
Developer: Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Mkpọrọ Mobile.
Developer: Ekwentị mkpanaka egwuregwu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Egwuregwu bọọlụ 10 kachasị mma na-enweghị Ntanetị, maka iOS na gam akporo
ASUS ZenBook Duo: Laptọọpụ ihuenyo abụọ site na ọdịnihu